Jumma Mubarak - Ihe niile mkpa ka ị mara banyere Friday 2018
Jumma Mubarak bụ okwu nke Alakụba na-eji niile gburugburu ụwa na-ekele ha Muslim na-eso ụzọ na ụbọchị isii nke izu a na-akpọ “Friday”.
Friday (Jumma Mubarak) bụ ihe dị mkpa taa na islam okpukpe na nwere pụrụ iche iwu site na Allah (Chineke). E nwere ihe abụọ mere ka nke a; Alakụba ekpe Friday ekpere ma ọ bụ Jumma ekpere kwa izu na nke abụọ dị ka ndị Alakụba akụkọ ihe mere eme, na e nwere ọtụtụ ihe dị mkpa mere e mere na a ụbọchị.
Jumma Mubarakah – Gọziri agọzi ụbọchị Of Jumma
jumma Mubarak pụtara
Gịnị bụ Jumma?
Gịnị bụ Jummah ekpere?
Jum'ah: The Importance Of Friday na Jumma ekpere
Bụ Friday a nsọ ụbọchị maka ndị Alakụba?
Uru nke ụbọchị Juma
Jumma Mubarak abụọ definition
mkpa nke Jumma Mubarak
Dị ka ozizi nke amuma Muhammad (PBUH), Jumma bụ a gọziri agọzi ụbọchị. Usọrọ ngọzi nke Juma, Alakụba na-ekele a na ụbọchị.
Mba na Middles nwekwara ha kwa izu ezumike on Friday kama Sunday nke mere na ndị Alakụba nwere ike igosi na Jumma ekpere na ụlọ alakụba na-anọ ha na ndị ezinụlọ. Na-akpọ ya a ụbọchị nke ọṅụ ga-abụ na ihe ọjọọ.
Nke a ụbọchị nwere ya mkpa islam okpukpe na akụkọ ihe mere eme. Ya mere, maara banyere nke a ụbọchị bụ ihe dị mkpa, na ihe mere na anyị na-ewetara a zuru ezu ibuotikọ n'ihi na ị bụ onye ga-enyere gị aka ịghọta ezi pụtara nke Jumma Mubarak, ya ngọzi na ihe na-eme Allah na amuma Muhammad (PBUH) kwuru banyere nke a dị mkpa taa.
Jumma bụ Arabic okwu nke pụtara “Friday”. Mgbe Jumma bụ Arabic asụsụ okwu ma ndị Alakụba niile gburugburu ụwa na-eji otu okwu maka Friday, dịghị mkpa na nke asụsụ ha na-eso.
Nke a bụ n'ihi na nke Friday payer nke aha bụ “Jumma Ekpere”. The pụtara n'ụzọ nkịtị nke Friday na English asụsụ bụ ọgbakọ.
Dị ka e kwuru n'elu, Jumma bụ ihe dị mkpa taa na Islam n'ihi na nke ihe ndị mere eme na ndị pụrụ iche ekpere. Nke a pụrụ iche ekpere a na-akpọ Jummah ekpere.
Ekpere a ka e nyere na Friday ọ bụla kama 2nd ekpere (Zuhr ekpere) ehihie na ụlọ alakụba. The Usoro iheomume nke Jumma ekpere nwere ike ịbụ dị iche iche na onye ọ bụla na ụlọ alakụba nke na-adabere ndị ọzọ nke oge nke alakụba ma ọ na-emekarị mere na oge nke Zuhur ekpere. amuma Muhammad (PBUH) kwuru:
"The ụbọchị kasị mma n'anya Chineke bụ Friday, ụbọchị nke ọgbakọ "
Ndị ọrụ na-agba ume Alakụba ileta alakụba maka Friday ekpere:
"O gị onye kwere! Mgbe oku na-aga ekpere na-ekwusa na Friday ngwa ngwa ike na-echeta na Chineke na-ahapụ onwe azụmahịa. Nke ahụ bụ ihe kasị mma n'ihi na ị ma ọ bụrụ na ị ma maara." (Quran 62:9)
Jumma ekpere bụ nwekwara pụrụ iche maka ndị Alakụba n'ihi n'adịghị ka ndị ọzọ na-ekpe ekpere nke ụbọchị, E nwere abụghị naanị Azaan (Kpọọ maka ekpere) na Salah kamakwa Imaams nke alakụba anapụta pụrụ iche Khutbah (okwu) tupu Jummah ekpere
The Friday ekpere Islam ike ga-agwụ agwụ enweghị a okwu nke a anapụta ke Arabic asụsụ naanị.
Na ọtụtụ majorities nke Muslim mba, na Imaam nke alakụba na-anapụta a okwu n'asụsụ nke ha metụtara Islam.
Gịnị bụ Jumma
Nzube nke a okwu bụ maara ndị Alakụba banyere oké ozizi nke amuma Muhammad (PBUH) na-echetara ya chụọ àjà maka Islam.
Nke a na omenala bụghị nnọọ nkịtị niile Muslim mba ma mba ndị dị ka Pakistan, India, Bangladesh, Egypt na Saudi Arabia-eme na-eso nke a.
Friday na-ewere nsọ ụbọchị maka Alakụba n'ihi na nke dị mkpa na ozi nke e nyefere onye amụma Muhammad (PBUH) maka ụbọchị taa na-agwa ya mkpa.
Nke a ụbọchị bụghị e dị nnọọ akpọ gọziri agọzi ma na-dị ka Eid ụbọchị (ụbọchị ememe) site amuma Muhammad (PBUH). Ma nke ahụ bụ bụghị nanị ihe mere na-akpọ Friday dị ka nsọ.
Na e nwere ọtụtụ ihe dị mkpa mere a na ụbọchị n'ihi nke Alakụba na-akpọ ndị Jummah ụbọchị (Jumu'ah)dị ka a dị nsọ ụbọchị. Ihe omume ndị a na-agụnye ihe omume ndị dị ka:
Allah kere Adam na Friday na zigara ya na Earth. Dị ka Islam ọkà mmụta, ọ bụkwa ndị ubọchi ọnwu-ya
Dị ka ndị Alakụba ozizi, e nwere kemgbe ihe hour mgbe niile na-ekpe ekpere nke onye e nabatara Allah
Jumma a kpọrọ dị ka ndị nna ha ukwu ụbọchị n'izu na n'otu ụzọ ahụ dị Ramadan a na-akpọ nna ukwu nke niile ọnwa
Islam ọkà mmụta na-ekwu na nke ọ bụla hour nke a ụbọchị, ọtụtụ puku mkpụrụ obi ndị a tọhapụrụ site na ọkụ ala mmụọ
Dị ka Ibn Majah, a n'ụbọchị a na-akpọ ka nne nke ụbọchị ebe Tirmidhi na-ekwu na mmadụ nwụrụ a na ụbọchị a ga-azọpụta site na ntaramahụhụ nke ili
Gịnị ka ị pụtara site Jumma Mubarak?
The ọrụ Mubarak bụ ma ọ bụ Mabrouk bụ Arabic asụsụ ụwa nke pụtara na gọzie ma ọ bụ ekele. Na Muslim ụwa, a okwu e ji mee ihe iji kelee ihe omume ma ọ bụ ụbọchị ndị ọzọ Alakụba.
juma Mubarak na bekee
jumma Mubarak pụtara na bekee
jumma Mubarak na arabic
Ya mere, mgbe unu nụrụ na a Muslim na-asị Jumma Mubarak ma ọ bụ Jumma Marouk ọzọ na-eso ụzọ, na nke a pụtara na ọ na-ekele ngọzi nke a pụrụ iche ụbọchị ọ bụla ọzọ. Mgbe ha abụọ na Mubarak na Mabrouk bụ Arabic okwu ma na-abụghị Arabic Muslim mba,
Alakụba na-ahọrọ iji okwu a na-ekele ndị na ngọzi nke Friday ọ bụla ọzọ kama iji okwu nke ha onwe ha obodo ma ọ bụ mba na-asụ asụsụ dị ka Urdu, Hindi, English, na Turkish etc.
Ụfọdụ ndị na-ahọrọ iji ihe ndị ọzọ yiri okwu na-ekele ndị na ngọzi nke Friday. Okwu ndị a na-agụnye obi ụtọ Jummah, obi ụtọ Jumma, obi ụtọ Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem na Friday Mubarak etc.
E nwere abụghị ihe ọ bụla dua maka Jumma Mubarak nke a hụrụ na ọrụ ma Hadees. Nke a pụtara na ị na-adịghị na-amachi onwe gị ka a kpọmkwem dua naanị ma i nwere ike ikpe ihe ọ bụla nke dabara gị mkpa.
Ọ bụrụ na ị Google na "Jumma Mubarak abụọ" ị ga-hụrụ ọtụtụ puku dị iche iche Jumma Mubarak dua n'asụsụ dị iche iche.
I nwere ike na-aga na nke ọ bụla n'ime ha nke na-amasị gị kasị kama ịmachi onwe gị na otu Jumma Mubarak abụọ, na Jumma Mubarak abụọ e ji mee ihe site Alakụba na-ekele site na online nyiwe dị ka Whatsapp, Facebook, na Twitter na ọbụna site na SMS etc .
Ị nwere ike ime ka Jumma Mubarak dua ọ bụla kpọmkwem ụzọ tinyere mgbe ukara ekpere Friday 2018 na ụlọ alakụba. Ụfọdụ alakụba na ụwa n'ụzọ pụrụ iche na-ahazi maka Jumma abụọ na nke ha na-ekpe ekpere maka dum ndi mmadu na kpọmkwem maka ndị Alakụba.
Jumma Mubarak 2018: Importance, abụọ, ngọzi, ः ades, na Quran https://jummamubarak.info
Nweta ihe ọmụma banyere Jumma Mubarak tinyere mkpa nke Jummah, abụọ, Hdes, na amaokwu nke Quran
Jumma Mubarak Latest Quotes Na English 2018
December 15, 2017 Enweghị asịsa
December 17, 2017 Enweghị asịsa
Jumma Mubarak Status 2018 In Urdu-English
December 27, 2017 Enweghị asịsa
Jumma Mubarak eserese 2018 Images na New…
April 19, 2018 Enweghị asịsa
Jumma Mubarak eserese Latest Collection 2018
December 20, 2017 Enweghị asịsa